Muxuu Ilaahay Masiixiyiinta u silciyaa? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Annagoo ah addoommada Ciise Masiix, waxaa naloo weydiiyaa inaan dadka siinno qalbi qaboojin markay dhibaatooyin kala duwan la kulmaan. Waqtiyada dhibku jiro, waxaa naloo codsaday inaan ku tabarucno cunno, hoy ama dhar. Laakiin waqtiyada silica waxaa mararka qaarkood nala weydiiyaa inaan sharaxno sababta Eebbe u oggol yahay Masiixiyiintu inay silicayaan, marka lagu daro weydiisashada gargaarka jir ahaaneed. Tani waa su'aal adag in laga jawaabo, gaar ahaan markii lagu weydiiyo waqti niyad jab, ama qiiro, ama dhaqaale xumo. Mararka qaarkood su’aasha ayaa la isweydiiyaa si dabeecadda Eebbe wax loo weydiiyo.
Fikradda ah Masiixiyiinta silica ku haya dhaqanka reer galbeedka ee warshadaha ka shaqeeya waa mid aad uga duwan kan Masiixiyiinta silica ku nool ee dhaqaalahoodu liito adduunka. Masiixiyiin ahaan, maxay tahay rajadayadu inay la xiriirto silica? Masiixiyiinta qaar ayaa la baray in markay Masiixiyiin noqdaan, waa inaysan mar dambe ku silcin noloshooda. Waxaa la baray in silica Masiixiyiinta ay keento rumaysad la’aan.
Cibraaniyada 11 waxaa badanaa loo yaqaanaa cutubka iimaanka. Waxay ku amaaneysaa dadka qaarkiis sida ay u aaminaan. Dadka ku qoran Cibraaniyada 11 waxaa ka mid ah kuwa baahan, kuwaas oo la silciyey, la silciyey, la jirdilay, la garaacay, oo la dilay (Cibraaniyada 11: 35-38). Way cadahay in dhibaatadooda aysan u horseedin kalsooni darro, sida ay ugu taxan yihiin cutubka iimaanka.
Dhibaatadu waa natiijada dembiga. Laakiin maahan silica oo dhan waa natiijada tooska ah ee dembiga nolosha Masiixiyiinta. Intii lagu gudajiray wasaaradiisa dhulka, Ciise wuxuu la kulmay nin indhala'aan ku dhashay. Xertii waxay weyddiisay Ciise inuu aqoonsado asalka dembiga sababay inuu ninku ku dhasho indha la '. Xertiisii ​​waxay moodayeen in silica uu sababay dembiga ninka, ama laga yaabee dembigii waalidkiis, maadaama ninku ku dhashay indha la '. Markii la weydiiyay inuu aqoonsado dembiga sababa indha la ', Ciise wuxuu ku jawaabay: Ma uusan dembaabin waalidkiis iyo waalidkiis midna; laakiin shuqullada Ilaah waa in loo muujiyo isaga " (Yooxanaa 9,1: 4). Mararka qaarkood Ilaah wuxuu u oggolaanayaa silica nolosha Masiixiyiinta inuu siiyo fursad lagu soo bandhigo injiilka Ciise Masiix.
Masiixiyiintii ku noolaa qarnigii hore runtii ma fileynin nolol Masiixi ah dhibaato la'aan. Rasuul Butros wuxuu soo socda u qoray walaalihiis iyo walaalihiis Masiixa (1.Pet. 4,12-16): Gacaliyayaalow, ha u ogolaan tijaabada dabka ee dhexdiina ka dhacday inay la yaabto, sida haddii wax uun kugu dhacaan; Laakiin sidaad ugu qaybsantaan dhibaatooyinka Masiixa, ku farxa inaad ku rayraysaan muujinta ammaantiisa. Waad barakaysan tihiin markii laygu caayo magaca Masiix! For the For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For For Waayo, ammaanta ammaanta Ilaah ayaa adiga kugu saaran, Iyaga wuu caytamay, laakiin isaguna wuu kugu ammaanmay. Sidaas daraaddeed midkiinna yuusan u xanuunsan sidii isagoo ah gacankudhiigle, ama tuug, ama sino, ama maxaa yeelay isagu waxyaalo qalaad ayuu dhexdilaa. laakiin haddii uu u silciyo sidii isagoo Masiixi ah, ma ceeboobi doono, laakiin Ilaah ha ku ammaano waxaas!
Dhibaatadu waa inaysan ku dhicin nolosha Masiixiyiinta
Ilaah had iyo goor ma ka saaro dhibaatada silica nolosheena. Rasuul Bawlos xanuun buu ku jiray. Ilaah wuxuu weydiistey saddex jeer inuu silicaas ka qaado. Laakiin Ilaah kama fogeyn silica maxaa yeelay silica wuxuu ahaa aalad uu Ilaahay adeegsiga ugu diyaariyay Rasuul Bawlos wasaaradiisa (2 Korintos 12,7: 10). Ilaah had iyo goor ma saarayo silicayada, laakiin waxaan ognahay in Eebbe naga dhiirrigeliyey oo nagu xoojiyay dhibkeenna (Filiboy 4:13).
Mararka qaar Ilaahay kaliya ayaa garanaya sababta silicayada. Ilaah wuxuu leeyahay ujeedo ah silicayaga iyadoo aan loo eegin inuu isagu noo muujiyo ujeedadiisa. Waxaan ognahay inuu Ilaahay silicayada u adeegsado wanaaggeenna iyo ammaantayada (Rooma 8,28). Annagoo ah addoommadii Ilaahay, kama jawaabi karno su'aasha ah sababta uu Eebbe ugu oggolaado silica xaalad kasta oo gaar ah, laakiin waxaan ognahay in Ilaah yahay mid awood leh oo si buuxda u maamuli kara xaaladaha oo dhan. (Daanyar 4,25). Oo Ilaah wuxuu ku dhiirrigeliyaa jacayl maxaa yeelay Ilaah waa jacayl (1 Yooxanaa 4,16).
Waxaan ognahay in Ilaah inaga jecel yahay jacayl shuruud la'aan ah (1 Yooxanaa 4,19) iyo in Ilaahay waligiis naga tanaasulayn ama naga tagin (Cib 13,5b). Intii aan u adeegaynayna walaalaheena dhibaataysan, waxaan u muujin karnaa naxariis iyo taageero dhab ah anagoo ka taxadarinayna jirradooda. Rasuul Bawlos wuxuu xusuusiyey Kaniisadda ku taal Korintos inay is-dhiirrigeliyaan midba midka kale ee silica ku jira.
Wuxuu qoray (2 Korintos 1,3-7): Mahad waxaa iska leh Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ah Aabbaha Naxariista iyo Ilaaha gargaarka oo dhan, kan naga wada qalbi qaboojiya dhibaatooyinkayaga oo dhan si aannu u qalbi qabno kuwa dhibaatooyin ku jira. Dhiirrigelinta aannu annaguba Ilaah ku dhiirrigelinno. Waayo, sida xanuunsigii Masiixu uu noogu shubay annaga oo qudha, ayaa haddana dhiirrigelinteenna xagga Masiix la wada socda.
Haddaynu cidhiidhi ku jirno, wuxuu u noqon doonaa raaxadaada iyo badbaadadaada, taasoo caddayn doonta inay waxtar u leedahay adkaysashada dulqaadashada isla dhibaatooyinka aannu ku xanuunno; haddii lana gargaarona waa gargaarkiinna iyo badbaadintiinna aawadood; Oo rajadayada aannu idiin qabnaa waa hubaal, annagoo garanayna;
Sabuurradu waa ilaha wanaagsan ee loogu talagalay dhibbane kasta; sababtoo ah waxay muujiyaan murugo, jahwareer iyo su'aalo ku saabsan imtixaanadayada. Sida sabuurradii ay muujinayaan, ma arki karno sababta silica, laakiin waxaan ognahay halka laga helo raaxada. Dhibta raaxada ee silica dhammaan silica waa Ciise Masiix Rabbigeenna. Eebbe ha ina xoojiyo markaan u adeegno dadka dhibaataysan. Aynu dhammaanteen dhiirrigelinno Rabbigeenna Ciise Masiix, inta lagu guda jiro waqtiyada silica waxaanan ku sii jiri doonnaa isaga ilaa maalinta uu si rasmi ah uga takhalusi doono dhibaatada adduunka oo dhan. (Muujintii 21,4).
waxaa qoray David Larry
Muxuu Eebbe u oggol yahay Masiixiyiintu inay silcaan?